အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေး ဌာန(Government Inspectorate of Vietnam -GIV)မှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်းအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်း အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ H.E Mr. Lee Sang-hwa နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Andaman Capital Partners မှ Mr. Kevin Murphy ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရန်ကုန်မြို့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Steve Marshall ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (KPK) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (KPK) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု